Setha okulindelwe ngesivumelwano sokwamukela | Martech Zone
Setha okulindelwe ngesivumelwano sokwamukela
NgeSonto, ngoMashi 22, 2009 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Njengomakethi, mhlawumbe uthembele kuzicelo eziningi ezivela eceleni nezinsizakusebenza zokuletha imikhankaso yakho empilweni.
Ngibhale ngaphambilini mayelana nokuthi kanjani ukubeka okulindelwe namakhasimende akho kushayela ukwaneliseka kwamakhasimende… Kukhona futhi indlela ongasiza ngayo ukuqhuba ukwaneliseka kwakho - wakhe isivumelwano sokwamukela ukusetha ithoni ngobudlelwano bakho nabantu besithathu.
Izivumelwano zokwamukela zisetha imithetho ethile yomdlalo kubathengisi osebenza nabo ngaphambi kokuqala. Izivumelwano zokwamukela ziqukethe izinto ezinjengalezi:
Ongumnikazi wempahla yengqondo kuphrojekthi.
Izinsiza ezingobani (ihluzo, ikhodi, njll.)
Ukuthi ukubambezeleka kokukhokha noma izinhlawulo kuzosetshenziswa uma umsebenzi ungakaqedwa ngaphakathi kwesikhathi esithembisiwe.
Izisetshenziswa zizodluliswa nini futhi kanjani uma kwenzeka ubudlelwano buya eningizimu.
Noma ngabe umuntu wesithathu angadlulisa iphrojekthi futhi asebenze kwezinye izinkampani noma izinsiza.
Ukuthi umuntu wesithathu angawukhuthaza noma cha umsebenzi abawenzayo.
Mhlawumbe unezinto ozithandayo nongazithandi lapho usebenza nabathengisi, ukuhlangabezana nesikhathi esifanele, amakhodi okugqoka, amadokhumenti, amafomethi, njll. Ukuba nesivumelwano esivamile sokwamukela ukuqala ubudlelwano nabathengisi bakho kuzokusindisa ekhanda futhi kugweme nezinkinga ezithile zomthetho phansi umgwaqo. Ngingabancoma!
Njengesivumelwano sokuqashwa nabasebenzi bakho sizogwema izingxabano nabasebenzi, isivumelwano sokwamukela singagwema izingqinamba nabathengisi nezinsizakusebenza ezivela eceleni.
Tags: ukusatshalaliswa kwabezindabaSesha Marketing
Abasebenzisi abaningi abaluthandi ushintsho
Uhlelo Lokuxhumana Oluhlangene lweHybrid = Kuyamangalisa
Mar 22, 2009 ku-11: 06 PM
UDoug, ufunda incwadi yokuphathwa kwephrojekthi? Manje, ungabhulogi kusasa mayelana nokungena kwephrojekthi yephrojekthi noma ngizokwazi ukuthi ukhona. Okushoyo kuyiqiniso kakhulu futhi noma ngubani onamakhono amahle wokulawulwa kwephrojekthi angakubona lokhu.
Kuzwakala kulula ukukwenza, kepha akunjalo. Ikakhulu lapho iphrojekthi ingachazwanga kahle ngemiphumela oyifunayo.
Ngibonile izinkinga ezinkulu njengawe okhuluma ngazo lapha ngemidwebo ikakhulukazi. Ngemuva kokuthi zenziwe kabusha futhi kwenziwa izinguquko, ngubani ongumnikazi wazo? Ukunquma lokhu ngaphambili kubonakala kungumsebenzi oyisidina kepha kungaxazulula isimo esibucayi kamuva.
Okuthunyelwe okuhle, kepha beka incwadi ye-PM kude! :)
Mar 22, 2009 ku-11: 44 PM
Cha, angisiye - kepha bengicabanga kakhulu ngalokhu ebengibhuloga ngakho eminyakeni embalwa edlule futhi angicabangi ukuthi ngichithe isikhathi esiningi kucebo nakubuholi njengoba ngisebenzise imininingwane enomkhawulo.
Futhi, ngokwethulwa kwesinye isiqalo ebengisebenza naso (Izinhlelo zeKoi), sifuna ukuqinisekisa ukuthi idola ngalinye elisetshenzisiwe linenzuzo enkulu kulo. Njengoba ngiqhubeka nokusebenza kulelo phrojekthi, ngizoqhubeka nokwabelana ngalolu hlobo lwezeluleko.
Ngizozama ukuqhubeka ngikuxube phakathi kwe-macro ne-micro, tho!
Ngiyabonga kakhulu ngempendulo!